Indlu yaseFama eHlaziyiweyo eHlaziyiweyo eneembono zoMlambo.
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguNicole
Umyeni wam uPhilip kunye nam sachitha unyaka ngothando sibuyisela le ndawo yembali kwidolophu yethu. Indawo yethu esiyithandayo yikhitshi, eneekhabhathi eziqhelekileyo ezenziwe nge-butternut yendawo. Yindawo entle yokupheka, ukuphumla, kwaye ukonwabele ilanga lasekuseni. Igumbi lokuhlala linendawo yokusebenzela yobo busuku buqhaqhazelis' amazinyo, edibana negumbi elitofotofo neligcwele iincwadi zethu esiziqokeleleyo kule minyaka idlulileyo. Iveranda engaphambili ebiyelweyo kulapho siye sachitha khona iingokuhlwa ezininzi, sonwabele ukutshona kwelanga ngasemlanjeni.
Indlu ikumgama nje omfutshane ukusuka kwisithili seshishini esiphambili, kwaye indlela yokuhamba ifikeleleka ngokulula esitratweni. Ibonelela nge-loop enkulu ye-3.5km yokuhamba ngokuhlwa okanye ukubaleka kwasekuseni ecaleni komlambo.
Le ndlu ibekwe eSt George, ebekwe ngokufanelekileyo kwimizuzu eli-15 ukusuka eNew River Beach, iimizuzu engama-25 ukusuka eSt Andrews ngaselwandle, imizuzu engama-30 ukuya kumda wase-US, kunye nemizuzu engama-40 ukusuka kwisixeko saseSaint John.
We love good food, new friends and discovering new places.
Asihlali kule ndawo kodwa ukuba ufuna nantoni na nceda usithumelele umyalezo, sinokufumana lula usapho ukuba sincede.